Indawo yoHlaziyo yoLimo eBalaseleyo, abaVelisi beNdawo yokuHlala eNtengiso | Shengqiang
Vumela ukuba Wonwabele Inkonzo yeGreenhouse yoBuchule yezoLimo egcweleyo.
I-Greenhouse yefilimu yePlastiki
I-Polycarbonate Sheet Greenhouse
IShengqiang Greenhouse ikuvumela ukuba wonwabele inkonzo epheleleyo yobuchwephesha yeTurnkey
Umthengisi wezolimo ochwepheshile onamava angama-18+ eminyaka.
Umboniso weGreenhouse yezoLimo
IGreenhouse Farming yinkqubo yokulima izityalo kunye nemifuno kwindawo engqongileyo yegreenhouse. IShengqiang greenhouse greenhouse abavelisi bezolimo baya kukubonelela ngeyona ndawo ibalaseleyo yeplasitiki yefilimu greenhouse, greenhouse yeglasi, greenhouse sheet yepolycarbonate, kunye nezincedisi zegreenhouse.
Ulimo oluneglasi ezininzi zegreenhouse yokutyala/umboniso/ukubona
I-Glas greenhouse ikhulisa intente ithatha isakhelo sentsimbi eshushu, into egqumayo edla ngokusetyenziswa kwiglasi edadayo ekumgangatho ophezulu we-4-5mm okanye iglasi epholileyo, iglazing ephindwe kabini: 4+6+4mm,5+6+5mm. kodwa unokukhetha izinto zokugquma ngokweemfuno zabathengi, umphezulu we-greenhouse kwaye ujikelezwe yiglasi ekhethekileyo yealuminiyam.Ulwakhiwo kunye noLungiseleloI-1.I-skeleton yenziwe ngeetyhubhu zentsimbi ezixande eziqengqelekayo ezibandayo, ezinamacala amabini ashushu ashushu.2.I-greenhouse ingadityaniswa kunye nenkqubo ethile eyimfuneko, enje, ngaphakathi&ngaphandle inkqubo shading, icala&inkqubo yokungenisa umoya ephahleni, ukufudumeza&iinkqubo zokupholisa, njl.3.Izixhobo zokugquma ziquka iindidi ezimbini zeglasi engenanto.Iinkcazo ziyi-4mm + 9mm + 4mm kunye ne-5mm + 6mm + 5mm.4.Olu hlobo lwendlu eluhlaza inokuqonda ulawulo olukrelekrele noluzenzekela ngokupheleleyo, olusetyenziswa ngokuqhelekileyo kutyalo lweentyatyambo kunye nemifuno,uphando lwezenzululwazi greenhouse,ihotele yokutyela yendalo,imarike yeentyatyambo,umboniso wokubonwa kunye nokuzala kwezithole.
Ubuchwephesha befilimu yeplastiki yegreenhouse yokulima imifuno echasene nexesha lonyaka
Multi-span yeplastiki ifilimu greenhouse isetyenziswa kakhulu kulinywa itumata, imifuno, iziqhamo kunye neentyatyambo. Inokubonelela ngeemeko zokukhanya okufanelekileyo, umswakama kunye nobushushu, ukuphakamisa imveliso kunye nokuchasana neentlekele zendalo. Ingazisa phambili okanye ibuyisele umva isibonelelo, ikhuphe ukuchasana kwelungiselelo kunye nemfuno.
Elona xabiso lihle ngokwezifiso zeplasitiki eluhlaza greenhouse
Uninzi lwezithuba ze-arch greenhouse ziimitha ezi-8 ububanzi. Isakhiwo saso esikhulu yimibhobho eshushu-galvanizing kunye neprofayili. Umphezulu kwaye ujikeleze ifilimu yePO ekhethekileyo ye-multi-span greenhouse okanye ibhodi yePC ye-8mm ububanzi. Ukuhanjiswa kwayo kunye nokugquma kugqibelele kakhulu. Ejikelezileyo inkqubo ye-shading yangaphandle nangaphakathi icwangcisiwe, kunye nenkqubo yokupholisa i-fan enyanzeliswayo, inkqubo yokuhambisa amanzi, inkqubo yokuchola amazolo, iibhentshi eziqengqelekayo kunye nenkqubo yokulawula i-elektroniki. Inkqubo yolawulo yolu hlobo greenhouse kumbindi wolawulo ngesandla sombane.I-arch greenhouse ingasetyenziselwa ukutyala iintyatyambo kunye nemifuno, ikwanokusetyenziswa njengendawo yokugcina izityalo zasemanzini kwintyatyambo, imifuno kunye nomthi. Njengoko i-greenhouse yokuhombisa, inokusetyenziswa njengendawo yokutyela yendalo, umboniso, ukhenketho kunye nophando lwesayensi, kunye nenkcubeko yasemanzini kunye nemfuyo.
Iindlu zokugcina izityalo ezishibhileyo zezolimo ezinexesha elinye ezithengiswayo
Chinese Agricultural Culture Poly Tunnel Greenhouses Greenhouses single-SpanIndawo enye yeplasitiki yeplasitiki yespanish yegreenhouse yenziwe ngombhobho oshushu owenziwe ngamazinki onemigangatho emithathu yefilim ukwenzela imathiriyeli yokugquma. Isakhiwo sesakhelo silula, ixabiso elincinci kwaye kulula ukuyifaka.
Qingzhou Shengqiang Greenhouse Technology Engineering Co.Ltd. ibambelela kwifilosofi yoshishino "Yomgangatho WokuQala, uMthengi kuQala". Le workshop ithatha indawo ye-40000 square metres, enamava angaphezu kwe-18 kwiminyaka yokwakha i-greenhouse, kubandakanywa noyilo lwe-greenhouse kunye nophando, imveliso kunye nokulungiswa, ukufakwa.
Iimveliso eziphambili: I-Polycarbonate sheet greenhouse, greenhouse greenhouse, greenhouse film greenhouse, flower greenhouse, hydroponic cultivate greenhouse, greenhouse farming farming, greenhouse green, commercial greenhouse, greenhouse greenhouse, single span film greenhouse, greenhouse yegadi yosapho, inkqubo yegreenhouse enezixhobo.
IiProjekthi zeGreenhouse zezoLimo ezininzi zeFilimu yeGreenhouses eKuwait
IiProjekthi zeGreenhouse zezoLimo ezininzi zeFilimu yeGreenhouses eKuwaitChina abavelisi greenhouse yorhwebo : Enkosi ngentembeko yabathengi bethu. Saqala ukwakha indlu yeglasi eluhlaza eKuwait. Ungafumana greenhouses ezikumgangatho ophezulu ngexabiso kukhuphiswano
1. Ifektri yethu ye-greenhouse yorhwebo sele ibandakanyeka kwimveliso ye-greenhouse iminyaka engaphezu kwe-10, inobutyebi bemveliso kunye namava okwakha kunye nobuchwepheshe.
2. Ifektri yethu yezolimo yegreenhouse inoyilo lweprojekthi, ulwakhiwo kunye namandla olawulo lweprojekthi, ukubonelela abathengi ngamava angcono okuthenga.
3. Ifektri yethu ngokweemfuno zabathengi bayila eyona nkqubo ilungileyo, kwisiseko somgangatho ophezulu kubathengi ukugcina iindleko kunye nokunyusa ukusebenza kakuhle kwabathengi.
4. Ifektri yethu ye-greenhouse yorhwebo inika iwaranti yonyaka omnye. Emva kwexesha lewaranti, siya kuhlala silelona xabiso lifanelekileyo lokubonelela ngokutshintshwa kwezixhobo zokutshisa.
Qhagamshelana nathi Fumana uYilo lwasimahla
Ukufumana imibuzo eyongezelelekileyo yegreenhouse yezolimo kunye neemveliso zentengiso yegreenhouse, wamkelekile ukuba usibuze.